Xirmooyinka dulsaarka ah
Qaab dhismeedka yaryar wax yar samee walxaha dhismaha lagu qasay Magaalada Magaalada ama ku yaal dhul gaar ah isla markaana siinaya qof gaar ah boos gaar ah. Qormooyin la taaban karo, casri ah kuraasta, xoolo, miisaska, geedo ubaxa leh ubaxyo, qashin-qubka, baaskiil taagan, daboolida geedaha iyo garoomada lagu ciyaaro waxay faaruqiyaan bannaanku waxayna ka dhigaan mid gaar ah, qurux badan oo shaqeysa.
Xirmooyin bir ah xanibaada mooshinka wareega aag la siiyay. Waxay yihiin qurxin isla mar ahaantaana waxay leeyihiin shaqo muhiim ah, iyagoo ka hortagaya baarkinka meelaha aan habooneyn.
Noocyada kala duwan ee naqshada ayaa u oggolaanaya xulashada jagooyinka la taaban karo ee la midka ah ee u dhigma booska magaalada ku xeeran.
Boostada inta badan la adeegsado waxay ka samaysan yihiin qoryo, bir iyo bir la taaban karo.
Alwaax la taaban karo oo la taaban karo, oo ka duwan alwaax alwaax ah, ayaa laga sameeyay shey aad u cimri dheer oo aan qudhmin oo u adkaysi u leh weerarka cayayaanka.
Waxyaabaha la taaban karo waa kuwa xoog badan oo waara.
Waxaa badanaa lagu isticmaalaa beeraha, jardiinooyinka guryaha iyo daaqadaha, iyo sidoo kale goobaha dadweynaha ee magaalada, tusaale ahaan xirmooyinka gawaarida la dhigto ama dayrka.
Alwaaxyada xayndaabka leh ee la taaban karo ayaa sidoo kale ah shay aan lagaran karin oo ah qaab dhismeedka yaryar, ma ahan oo keliya goobaha dadweynaha, laakiin sidoo kale guryaha gaarka loo leeyahay.
Deedka ayaa la sheegay inuu shaqadiisa si wanaagsan u qabto markii uu si fiican u dhaqmo xayndaabyada xayndaabkataas oo ka dhigaysa iyaga. Maaddooyinka laga samayn doono ayaa kuu oggolaanaya inaad go'aamiso xooggooda iyo codsigooda. Boorarka dayrarka waxay ka samaysan karaan alwaax, bir, bir la taaban karo ama bir la dubay.
Waxay ku kala duwan yihiin qiimaha, cimri dhererka, fududeynta rakibaadda iyo suuxinta.
In kasta oo baararka Shuruudo aad bay u cimri dheer yihiin, faa'ido darradoodu waa nabar iyo dildilaac soo noqnoqda. Haddii biyuhu ku ururaan jeexjeexan, waxay qaboobi kartaa qaboobaha waxayna sababi kartaa qaybo ka mid ah boostada inay dillaacaan.
Dadka qaar waxay doorbidaan inay isticmaalaan qoraallo ka sameysan waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin: gaaska, bir lub qoryaha.
Qormooyin la taaban karo inta badan way ka qaalisan yihiin kuwa dhiggooda alwaax ah, laakiin uma baahna dayactir iyo soo-jiidasho sannadle ah.
Hoos udhaca ayaa ah inay tahay dhexdhexaad post la taaban karo culeyskiisu waa 40 kg, taas oo kordhisa qiimaha kulanka, in kasta oo dhinaca kale, jagooyinka la taaban karo ay bixiyaan taageero runtii adag.
Xirmooyinka saqafka leh ayaa laga iibsan karaa bakhaarada hagaajinta guriga ama si toos ah looga soo saari karaa soo-saaraha, kaas oo guud ahaan soosaaraya badeecado leh cimri dheeri iyo naqshad aan caadi ahayn.
Qormooyin la taaban karo Naqshadeynta Magaalada
City Form Design bollards waxaa lagu gartaa naqshad casri ah, iyo tayada sare ee alaabooyinkan waxaa lagu hubiyaa hubinno isdaba joog ah oo ku saabsan qalabka iyo hababka farsamada.
Shirkadeena waxay la shaqeysaa sida ugu fiican istuudiyaha dhismaha iyo naqshadeeyayaasha, kuwaas oo hubiya qaabka ugu wanaagsan iyo wax u qabashada waxyaabaha yaryar ee dhismayaasha ay soo saareen.
Naqshadaynta magaaladu waa wakiilka gaarka ah ee shirkadaha Talyaani ah ee Metalco iyo Bellitalia ee Poland.
Metalco waxay soo bandhigtaa noocyo kala duwan oo kala jaad ah oo yar yar iyo alaabooyinka dhismaha ee magaalada oo laga sameeyay bir iyo xaabo.
Deeqda waxaa ku jira waxyaabo ka mid ah boosaska magaalada, tusaale ahaan, beeraha nasashada, jidadka, jardiinooyinka iyo saldhigyada.
Metalco waxay soo saartaa kuraas, buskudyada dariiqyada, dhejiska, golsayaasha macluumaadka, daboolka geedka, dheriyada ubaxa, kuraasta baaskiilka iyo noocyada kala duwan ee alaabta guryaha, tusaale ahaan kuraasta magaalada.
Bellitalia waa mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka ugu horreeya isku dhaf ah, marmar iyo isku darka dhagaxa dabiiciga ahkuwaas oo loo isticmaalo abuurista walxaha agabka guriga.
Shirkadda waxaa la aasaasay sanadkii 60-kii Talyaaniga waxaana wali lagu kala saaraa alaabo tayo sare leh, hal-abuurnimo iyo nashqadeyn casri ah.
BELLITALIA Srl waxay soo saartaa walxo ka kooban qaab dhismeedka magaalooyinka. Waxaa jira fadhiisimo la taaban karo oo la taaban karo, boodhadhka macluumaadka, dheriyada la taaban karo iyo dhagaxa, ilo, boorar xaddidaya taraafikada gawaarida waaweyn iyo garoonnada ciyaarta, iyo sidoo kale dhismeyaal la dhagax dhigay, dhagxaan ama wax lagu daadiyo, oo dunida oo dhan laga garan karo.
Bellitalia waxay soo saartaa oo iibisaa boqolaal shey oo shaqeynaya oo qurux badan, oo sifiican ugu habboon boos kasta oo magaalada ah.
Si loo kobciyo aruurinta, agabyada cusub ayaa lagu daray mashaariicda soo ifbaxa: birta birta ah, birta dhagaxa ah iyo alwaaxda si ay ugu dhigmaan kuwa la taaban karo isla markaana abuuraan qaab gebi ahaanba cusub.
Wax soo saarkooda BELLITALIA® sidoo kale waxay isticmaashaa walxo dhagaxyo qaali ah iyo iskucelcelis marmar ah oo midab hodan ah iyo dabeecado dabeecadeed.
Bellitalia maanta waxay hormuud u tahay wax soo saarka iyo iibinta alaabta guryaha. Waxay isticmaashaa waxyaabo ay ka mid yihiin noocyada kala duwan ee la taaban karo (HPC, UHPC), dhagaxyo dib loo habeeyay oo la dayactiray, isku darka gunta, dhagaxa dhalaalaya, alwaax iyo bir.
Alaabada waxsoosaarka la taaban karo ee ay isticmaashay BELLITALIA® waxay ka timaadaa Dolomites ee ku xeeran Shirkadda. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka shidaalka hooseeya iyo qiiqa hawada CO2 ee gaadiidkooda.
Alaabada ka samaysan dhagaxyada talyaaniga ayaa dib loo warshadaynayaa loona isticmaalaa in lagu soo saaro iskuxirka dhagaxyada qaaliga ah.
Waxyaabaha la wadaago ee qaabkan loo soo saaray ayaa ah mid isku-dhafan, waarta oo dib loo isticmaali karo, sidaa darteed tirada dib-u-adeegsiga waa aan xadidnayn.
Sanadkii 2015, BELLITALIA® waxay diyaarisay qaacido cusub Ka-hortagga uurka.
Waa qalab cusub oo kuu oggolaanaya inaad abuurto waxyaabo hal abuur leh oo xiise leh oo loo adeegsado goobaha dadweynaha magaalada.
Ka-hortagga uurka waa summad ka diiwaan gashan Bellitalia oo keliya. Waxaa la soo saaray iyada oo lala kaashanayo saynisyahanno ka socda Kuliyadda Matter, Deegaanka iyo Injineerinka Magaalada ee Jaamacadda Marche (SIMAU) iyo istuudiyaha naqshadaha adduunka caan ka ah.
Waxyaabaha la taaban karo ee la taaban karo ee lagu sameeyay isticmaalka tikniyoolajiyadii ugu dambeeyay ee Ultratense Concrete® waa kuwo aad u balaastig ah mahadnaqna ay u leeyihiin awgood sidoo kale waxaa lagu ridi karaa wasakhahaasi.
UTC® waa qalab leh qalab farsamo oo heer sare ah, oo awood u siinaya soo saarista alaabada leh lakabyo aad u dhuuban iyo goobo saddex-geesood qaloocsan leh.
waraaqaha la taaban karosaldhigyada aasaasiga ah ee la taaban karoxayndaab la taaban karo oo la taaban karowasakhda loogu talagalay dhejiska la taaban karodayrarka, dhejisyo la taaban karoPatentwaraaqaha la taaban karocastorama post postsqiimaha baararka la taaban karoliiska qiimaha la taaban karo ee liiskaxargaha la taaban karo ee xayndaabkajaranjarooyinka la taaban karo ee dayrka goluhutiirarka la taaban karo ee orchard-kajaranjarooyinka la taaban karo ee mesh-kaqoryaha la taaban karo ee shabaqa kayntaxayndaab la taaban karo oo la taaban karoqurxinta la taaban karo ee la taaban karoxirmooyinka gawaarida la dhigto oo la taaban karojaranjarooyinka la taaban karo ee ka hooseeya dusha sarejaranjarooyinka la taaban karo ee ka hooseeya qiimaha dhulka dushiisacabbir la taaban karo oo cabbir ahxayndaabyada xayndaabkaxayndaab la taaban karo oo la taaban karocastorama xayndaabyada la taaban karoxirmooyinka gawaarida la dhigtoxirmooyinka gawaarida la dhigto oo la taaban karoKa-hortagga Ultratara